N'Awka, Ụmụnwaanyị ACORA Emeela Ụka Nne Ahọ 2022 n'Ụzọ Pụrụ Iche - Igbo News | News in Igbo Language
N'Awka, Ụmụnwaanyị ACORA Emeela Ụka Nne Ahọ 2022 n'Ụzọ Pụrụ Iche
Mar 31, 2022 - 06:07
Odogwu na enyi ya nwaanyị ka ha na-eme ejije na mmemme ahụ
A kpọkuola ma dụọ ụmụnwaanyị ọdụ ka ha bụrụ ndị dị ike ma na-ekpesikwa ekpere ike oge niile iji guzogide ihe ọbụla chọrọ itisà udo na ọganiru nke ezinụlọ ha.
Onyeisi nchụaja nke ụlọụka ‘Anglican Church of Redemption Parish’ dị n'Awka, bụ Venerebụụl Obiorah Alokwu n'okwuchukwu ya na mmemme ụka nne nke ahọ 2022 nke ụka Angịlịkan n'ụwa gbaa gburugburu.
N'okwuchukwu ya na mmemme ahụ, Ven. Alokwu gụpụtara ozi pụrụ iche nwunye Ashbishọọpụ ụka Angịlịkan na mpaghara Niger, bụ Oriakụ Chioma Ibezim ziteere ụmụnwaanyị ahụ na mmemme ụbọchị ha, bụ nke o sitere na ya wee dụọ ha ọdụ ka ha dị ike, ma n'ekpere, ma n'ịrụ ọrụ dịịrị ha dịka nne n'ezinụlọ, maka na ọ bụ ihe doro anya na ihe mkpọbiụkwụ na ihe iche aka mgba nwere ike ịdapụta na mgbe na mgbe.
Ọ dụkwazịrị ha ọdụ ka ha tụkwàsị na Chineke ma na-ekwesikwara Chineke ntụkwasịobi, n'agbanyèghị ihe dị icheiche ha nwere ike izute n'ime alụmdinanwunye ha.
Dịka ọ na-akatọ̀ akparamagwa ụfọdụ ụmụnwoke na-eti nwunye ha ihe maọbụ na-emekpa ha ahụ n'otu ụzọ maọbụ nke ọzọ; ọ gwakwara ụmụnwaanyị ka ha yiri ezi akparamagwa dịka uwe ma bụrụ ndị ezigbo nne.
Mmemme ụka nne ahụ bụkwa nke a nọrọ na ya wee kpee usoro ekpere dn icheiche, mee ihe ngosi obere ejije, waa achịcha bekee, ma gbakwa ọnya ego maka nkwàdo òtù ụmụnwaanyị.
A nọkwara na ya bụ mmemme wee kpọpụtasịa ndị otu tuuru ugo n'asọmpi dị icheiche e mere na mmemme pụrụ iche a kpọrọ ‘Social Evening’ ụmụnwaanyị ahụ chịkọbara ụbọchị Satọdee tupu ụbọchị ụka nne ahụ kpọmkwem.
Dịka mpụtàrà asọmpi ahụ siri kwuo, ndị òtù ‘Peace’ gbara ndị nke anọ, ndị ‘Joy’ gbara ndị nke atọ, ndị otu ‘Faith’ gbara ndị nke abụọ, ebe ndị otu ‘Love’ bụkwazị tuuru ugo dịka ọkaibe site n'ịgba ndị nke mbụ.
N'okwu ya n'ebe ahụ, onyeisi ụmụnwaanyị n'ụlọụka ahụ, bụ Oriakụ Stella Alokwu kèlèrè ndị ọbụla nyere aka maọbụ tụnye ụtụ n'otu ụzọ maọbụ nke ọzọ iji mee ka ya bụ mmemme dàá ụdà. O kwupụtazịkwara olileanya o nwere na nke ahọ na-abịa ga-amakarị nke ahọ ma kakwa ya dàá ụda n'ụzọ dị ukwuu.
Ndị Amị Awakpola Ogige Ndị Omekoome, Bute Akpati Ozu, Égbè, Ọgwụ na Ngwaọgụ
Ndị Nna 'Chapel of Redemption' Emeela Ụka Nna 2021 n'Ụdị...
Izunna Okafor Jun 20, 2021 0
Dayọsiisi Awka Echenwòóla Ndị Nne n'Ihu Chineke, Doo Ha...
Bishọp Ezeokafor Agbapeela Akụrụngwa Nlekọta Ahụike Ọhụrụ...
Izunna Okafor May 8, 2022 0
Achbishọp Okeke Adụọla Ndị Ụka Ka Ha Kwe Ka Mụọ Nsọ Na-Edu...
N'Awka, Ụmụnwaanyị ACORA Emeela Ụka Nne Ahọ 2022 n'Ụzọ...
Izunna Okafor Mar 31, 2022 0